Visa ulwazi - Poltava Medical & Dental Academy
Zonke abafundi international ukuthola i-visa cwaningo ukungena Ukraine. Umfundi kufanele athumele Isimemo sokuqala futhi incwadi yokwemukela Ukraine lenxusa uma ufaka i-visa.
Abafaka izicelo kufanele ubuze eliseduze Ukraine Embassy noma isikhundla noma zidinga visa ukungena Ukraine. Le ncwadi simemo noma ukulaliswa esibhedlela ekhishwa Ukraine Medical & Dental Academy, UMnyango wezokuXhumana kwamaZwe.
Ukuze ukwamukela isimemo sokufunda futhi Ukwamukelwa Letter, umfundi kufanele ahlinzeke okuhle izinga ikhophi scan kwemibhalo alandelayo,
International Passport / Travelling idokhumenti ikhasi idatha nge ifotho kuso. Igama umfundi kanye nenombolo ye-serial of Passport, kufanele usibhekise ngokucacileyo VISIBLE.The semthethweni Passport ezingengaphansi kuka olandelayo 1 ngonyaka
Imibhalo Sikhungo O level / SSCE / HSSC,Bachelor noma Master Degree uma ikhona
Igama, Igama neSibongo
Iphasiphothi yase-ubuqiniso osukwini lokukhishwa & kokuphela kwesikhathi
ikheli lesikhashana / ikheli yamanje uma uhlobo oluhlukile ikheli unomphela
Visa Ukukhishwa Izwe / indawo
Ukraine MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY (UMSA) iqala abanikeze incwadi sipho kusukela ngoJanuwari minyaka yonke futhi izimemo ezivela enyangeni ka APRIL.
Student kumele babe ukudlulisa amacala yokuhlala yokubhuka,incwadi ukwesekwa visa kanye neposi .Iyiphi izobe okukhulunywa encwadini ukulaliswa esibhedlela e 10 izinsuku zokusebenza kungenjalo asikwazi ukukhansela admission.After kokuthola amacala University izoqala sokucubungula Isimemo Incwadi futhi kuzothatha 4 izinsuku zokusebenza ukuqedela inqubo incwadi isimemo.
Student kumele uxhumane Ukraine Embassy yakhe / izwe lakhe ukuze afake isicelo visa umfundi ngemuva kokuthola incwadi isimemo original ivela kithi. Kwamanye amazwe Ukraine embassy iqala ukusebenza nge Student Visa Izicelo kanye udaba umfundi Visa ngo-July 15th November 15th ngokuvamile ibizwa enwetshiwe uDisemba / March(ngenkambo wokulungiselela).
madokhumende alandelayo kufanele zithunyelwe ku Ukraine Embassy ukuthola umfundi Visa.
Amaphepha adingekayo ukuthola umfundi Visa
ifomu Visa Isicelo egcwele
International iphasiphothi yase-Okuhambayo Document evumelekile hhayi ngaphansi konyaka owodwa
Original Isimemo Incwadi evela University
Isitifiketi Lokuzalwa, Olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Ukraine Embassy
School Original Izitifiketi O level / SSCE / HSSC, Bachelor noma Master Degree uma ikhona, Olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Ukraine Embassy
Incwadi ka imvume Ministry Ezemfundo
Jikelele Impilo- Isitifiketi Medical ekhishwe okungenani izinyanga ezimbili ngaphambi emnyango ku Ukraine. Olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Ukraine Embassy Kumele ibhaliswe ngokomthetho ngo-Ministry Health
HIV- AIDS Certificate Negative esikhishwe okungenani izinyanga ezimbili ngaphambi emnyango. Njengoba yahunyushelwa olimini Ulimi Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Ukraine Embassy. Kumele ukuba kube semthethweni ngu iHhovisi lezeMpilo
Health Insurance esehlanganise unyaka owodwa / ngoba amanye amazwe kuphela Okuhambayo isikhathi
Ukuxhaswa Incwadi evela Abazali / Umuntu uya athwale izindleko umfundi ngesikhathi uhlala / ukutadisha e-Ukraine. Akusona isimo ngoba zonke izizwe
Isitatimende Bank ukufakazela ikhono zezimali. Akusona isimo ngoba zonke izizwe
12 Isithombe 3 * 4 cm
Ukuze futhi Fro Air ithikithi unyaka owodwa
Umfundi yena kudingeka ubuze Ukraine Embassy / lakhe ezweni lakubo unomphela / ukuhlala yesikhashana. Ukraine embassy akudingi translation Russian / Ukraine for ezinye izizwe.
Sicela uqiniseke ngaphambi kokushiya ezweni lakho konke ngezansi wathi amadokhumende kufanele kube kanye nawe, izikhulu zomnyango wezifiki airport bayofuna ngalezi amadokhumenti.
20 izithombe yokulinganisa 3 × 4 usayizi ngamunye.
Umphumela-HIV - uhlolwe udokotela isitifiketi (kumele olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngumphakathi ummeli olungisa izivumelwano noma nge Ukraine lenxusa lezwe lakini).
isitifiketi wezokwelapha Jikelele / isitifiketi Imfanelo Physical (kumele olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-Ukraine lenxusa lezwe lakini).
izitifiketi School Original (kufanele olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho yi-Ukraine lenxusa ezweni lakho).
isitifiketi Ukuzalwa Original ( kumele olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho by the Ukraine lenxusa lezwe lakini).
Omunye ikhophi Photostat yephasiphothi yakho kanye visa Ukrainian okuyinto ekhishwe Ukraine embassy.
incwadi Isimemo Sokuqala.
Ithikithi indiza kufanele kube ngapha nangapha eziya ezweni lakini (isb, ithikithi evulekile).